Fanolanana, fitifirana ankizy, vono... :: Miaramila fito mampijaly vahoaka • AoRaha
Mpitandro filaminana mampihorohoro ny vahoaka.
Miaramila efatra, tany Beravina, no miatrika famotorana any amin’ny Tobim-paritry ny Zandarimaria noho ny fampihorohoroana tamin’ny tifitra variraraka sady nandratra ny delegem-panjakana.
Miaramila telo hafa indray voampanga ho nanolana vehivavy roa, tany Ambalamidera sy Isandra. Ankoatra ireo dia miaramila maro no voarohirohy nitifitra zaza teny am-baben’ny reniny sady nangala-bilany, tany Bemahatazana-Tsiroanomandidy, tamin’ny alahady
Miaramila irahina hampandry fahalemana ao anatin’ny hetsiky ny fanjakana ireto voarohirohy amin’ny karazana fihoaram-pefy samihafa ireto. “Niditra tao amin’ny tanànan’i Manombo- arivo ireo tafika am-polony. Nitsoka kiririoka sy nana- poaka basy tsy an-kiato. Nihevitra azy ireo ho dahalo ny mponina ka nihorohoro. Niantefan’ny bala ny zazakely iray nobaben’ny reniny ka naratra.
Lasan’ireo miaramila ny omby hatramin’ ny vilanin’ireo mponina”, hoy ny loharanom-baovao nitatitra ny zava-nisy, tany Bemahatazana-Tsiroanomandidy.
“Nisy tamin’ireo miaramila voatonontonona no nilaza taty aminay ny fisian’ireo omby nentin’izy ireo, izay nolazainy fa tsy misy taratasy. Nisy ihany koa ny zaza naratra voatifitra tany an-toerana. Hisokatra ny fanadihadiana momba izao raharaha izao manomboka rahampitso”, hoy ny Zandarimaria any Tsiroanomandidy, omaly.
“Nanao tifi-danitra variraraka ireo miaramila avy amin’ny Tafika miisa efatra, tamin’ny 18 mey lasa teo. Naratra mafy novonoin’izy ireo ihany koa ny delegem-panjakana. Rehefa nalaina ny basy tany amin’ireo miaramila ireo dia natao tao amin’ny trano iray. Mbola novakian’izy ireo indray io trano io avy eo. Nosamborina ireo miaramila vokatr’izany rehetra izany ka voatazona ao amin’ny tobin’ny zandarimaria”, hoy kosa ny loharanom- baovao nampahafantatra ny tranga, tany Beravina-Morafenobe.
Ho an’ny tany Ambala- midera sy Isandra, tamin’ny herinandro lasa teo, dia miaramila telo lahy avy amin’ ny Tafika no voarohirohy ho nanolana vehivavy roa. Samy fotoran’ny zandarimaria ihany koa izy ireo, ankehitriny.
Hentitra ny avy amin’ny Tafika malagasy manoloana an’ireo fihetsika mamoehatra ireo . “Misy ny famotorana atao araka ny baikon’ny lehiben’ny Etamazaoro jeneralin’ny Tafika. Raha toa ka voaporofo fa misy idiran’ ireo miaramila amin’ny vokatry ny famotorana dia tsy misy alaharo fa tsy maintsy mizaka ny sazy omen’ny Fitsarana sivily azy izy ireo. Manaraka ato amin’ny Tafika ihany koa ny sazy ara-miaramila, izay mety hiafara amin’ny fandroahana”, hoy ny fanehoan- kevitry ny Etamazaoro
Fivarotana entana hosoka :: Menaka fanosotra sivinjato isa noraofina teny an-tsenan’Anosibe
Fandrobana mpitondra môtô :: Telo ambin’ny folo lahy hiakatra Fampanoavana